Vaka Bhizinesi Chikwereti - Kugadzira Corporate Zvikwereti & Kukwidza Mari
Kugadzira Kiredhiti Kiredhiti kukambani yako idanho rakakosha mukusimudzira kwayo. Kuvaka Corporate Kiredhiro profil kwakasiyana kwazvo neako wega, kana "Mutengi Kiredhiti" nekuti zvinoenderana nechikwereti chakapihwa zvakananga kukambani yako nemasangano emari nevatengesi, uye kwete akavakirwa kana kuvimbiswa munzira ipi neipi pachikwereti chako pachako. Masangano akasiyana siyana ekuzivisa anoshandisa nzira dzakasiyana kuyera "kukosha kwechikwereti" kwekambani asi zvese zvinomhan'ara pazvivakwa zviviri zvakakosha: Ko kambani yako yakabhadhara zvikwereti zvayo munguva yakadii? Iko kambani yako inezvemari inonzwika zvakakwana kubhadhara zvikwereti zvayo? Izvo zvakakosha kuti ugadzire Bhizinesi Chikwereti Mbiri kuti iwe ugone kuchengetedza mashandiro echikwereti uye mamwe marudzi ezvikwereti kubva kumasangano emari. Aya masangano anosarudza kushanda nemakambani ane rondedzero yakaratidzirwa yekubhadhara, uye kugona kubhadhara zvikwereti zvenguva yemberi. Izvi zvakare zvine chokwadi kune vangangoita vatengesi uye vanotengesa: ruzhinji runoongorora kiredhiti yekambani yako isati yakupa chikwereti kwauri. Kuwana kana kurendesa chivakwa chebhizinesi rako ndeimwe nzvimbo uko kwakakosha zvakanyanya kuvaka bhizinesi chikwereti chimiro: Kuva nekambani yakasimbiswa kana kambani kiredhiti kiredhiti pane zvakanaka mazwi kunogona kutungamira kune akanaka mazwi nemitengo, izvo zvinogona kureva yakaderera mitero uye mari yakachengetedzwa!
Vaka Bhizinesi Chikwereti - Bhenefiti Yekuparadzanisa Kiredhiti
Mamwe mabhenefiti ekumisikidza kiredhiti chikwereti chimiro chebhizimusi rako rinosanganisira kugona kumisikidza hukama-hwakavakirwa hukama nevatengesi kana vatengesi, nyore kuwana zvivakwa zvezvivakwa, kuwana mota mota kana maorease, uye kumisikidza mashandiro echikwereti kubva kumabhangi asiri zvinoenderana nechako kiredhiti kana kuvimbiswa, pachako. Sezvataurwa pamusoro apa, zvikwereti nezvikwereti izvi zvinotorwa nekambani kana bhizinesi chairo - chinzvimbo chakaparadzaniswa zviri pamutemo nemuridzi (s) chake. Izvi zvinogona kubatsira zvakanyanya kana iwe uine yakaderera pane yakajeka pristine kiredhiti nhoroondo sezvo pasina wega chikwereti cheki. Kana chikwereti chekambani changomiswa nekuchengetedzwa, zvikwereti kana kuwedzerwa kwechikwereti kunoenderana nezvakanaka zvekambani kiredhiti, pasina zvivimbiso zvega zvinodikanwa. Chero bedzi zvinhu zvakatengwa zvikawira mukati megwara chairo, uye matanho anochenjera anotorwa kuti ave nechokwadi chekuti anowanikwa uye anoshandiswa nenzira kwayo, ipapo kuwanikwa kwemidziyo yakadaro kuri mukati mekusvikwa kwekambani ine chimiro chakanaka chechikwereti.
Vakaparadzanisa Masangano uye Kugadzirisa Njodzi
Chimwe chikonzero chekumisikidza Bhizinesi Chikwereti chimiro ndechekuti zvinopa kupatsanurwa kwemari nenhumbi kubva kumunhu wako, uye zvinoenderana nekuchengetedza fomu rekambani. Kupatsanurwa uku kwakakosha nekuda kwezvikonzero zvishoma. Kutanga uye pamberi pezvese, zvinobatsira kudzikisira yako wega chikwereti nekuona kuti hapana mari yekambani (kana zvikwereti) zvinosanganiswa nemari yemunhu. Kana iyo kambani nekambani yemari chikwereti ikachengetedzwa nemazvo, zvakaoma kwazvo kune vane chikwereti kuti "vabaye chifukidziro chemubatanidzwa" kana zvasvika pakutsvaga kambani kune zvikwereti zvisati zvabhadharwa. Iwe unenge wakachengetedza kuvimbika kwesangano rako rakaparadzaniswa pamutemo chinzvimbo, uye uchave uine mashoma zvakanyanya chero akananga, ehukama chikwereti. Izvi zvine simba rakakura pazvinhu zvemunhu sezvo zvichinyatso dzivirirwa nekuti zvikwereti nezvikwereti zvakaitwa nekambani, kwete munhu. Iyo chaiyo teneti yekumisikidza mubatanidzwa ndeyekuparadzanisa varidzi (s) kubva panjodzi uye kudzikisira chisungo. Uchishandisa yako wega kiredhiti kiredhiti kuchabvisa zviri pamutemo zvakasiyana chimiro chinzvimbo chekambani yako, nokudaro ichikuvhurira iwe pachezvako uchipokana nematare edzimhosva anoitirwa kambani yako. Zvakawanda sekubatanidzwa kwemari, kushandisa yako pachako kiredhiti kodhi kana yako wega zvinhu kuvimbisa zvikwereti kunozokuita iwe wakanaka mutambo weanogona kuunganidzwa kana chikwereti masutu kubva kumabhangi uye nevamwe vakweretesi. Izvi zvakare zvine chokwadi kune emitero kana emahara ejensi; chero rudzi rwechikwereti chemunhu chinovimbiswa nemuridzi wekambani kune chikwereti chekambani kana kiredhiti chichaonekwa sekusiya fomu yemakambani - izvi zvinogona kuve nemitero yakakomba iyo inogona kukanganisa chikwama chako.
Kuvaka Kiredhiti Kiredhiti
Bhizinesi kiredhiti inogona kutora mafomu mazhinji, uye kusarudza kuti ndeipi fomu yekambani inoshanda inoshanda zvakanyanya kukambani yako kwakakosha mukubudirira kwechikwereti ichocho, uye nekuenderera mberi kwakanaka kukura kwekambani yako yechikwereti.
Pakutanga, vazhinji varidzi vemabhizinesi vashoma vanoshandisa yavo yechikwereti, kana zvimwe zvisina kurongwa masosi (sekukwereta kushamwari kana hama), kana kutanga mashandiro nekuwana bhizinesi diki kana micro zvikwereti kubva kuhurumende (SBA). Nepo izvi zvingave zviri chete sosi yemari kana mari yekushandisa pakutanga kwekuumbwa kwebhizinesi rako, kutsvaga yakawanda yechinyakare kiredhiti uye zvikwereti kubva kumabhangi uye mamwe mafemu (kusanganisira vatengesi nevatengesi) padanho rebhizinesi kana rekambani zvichave zvakakosha pakuita uye kukura kwekushambadzira kwako. Izvi zvichave zvakakosha kubva kune ese emari uye echisimba maonero.
Kune mamwe matanho akapusa, akakosha aunotora kuti uve nechokwadi chekuti yako kiredhiti kuita kuri kuziviswa kumarudzi akasiyana siyana ekuzivisa. Mamwe ematanho ekutanga ndeaya:
Kuve nechokwadi chekuti vatengesi vako vanomhan'ara kune chero eAma bhizinesi Ekubika maAgency.
Ita shuwa kuti kubhadhara kunoitwa maererano nemitemo yakabvumiranwa nevanokweretesa kana vanotengesa.
Chengeta mabhuku akajeka uye uteedzere iwo akafanira ma accounting maitiro kune ako erudzi rwebhizinesi.
Paunongotanga bhizinesi kiredhiti mune chero fashoni, bhizinesi kana mubatanidzwa unopihwa "giredhi" kana chiyero nemasangano akasiyana ekuyera (Dun & Bradstreet, Experian Bhizinesi, Standard & Varombo, BusinessCreditUsa, FDInsight, nezvimwewo) uye chiyero ichi chinoshandiswa uyezve nemabhangi akasiyana siyana, vatengesi, kana vanoita mari kuitira kuti vaone huwandu hwenjodzi hunobatika mukupa chikwereti chekambani kana kuisa mari mubhizinesi riri kutaurwa. Aya ma ratings anotariswa navo vega, kana mune iyo yekuwedzera (uko kukosha kwechikwereti, kureba kwenguva iripo, zvikwereti, purofiti, nezvimwewo zvakaiswa mukati) nevanogona kukweretesa, vatengesi kana vanoita mari pavanofunga kana kwete kupa chikwereti , kana kuisa mari mukati, kambani. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitiro ekuvaka bhizinesi kiredhiti uye Corporate Kiredhiti Zvikoro ndapota ona izvo zvakapihwa kune yega yega kiredhiti inoshuma agency
Kunze kwekunge nyanzvi ine ruzivo ichibatsira nekuvaka iyi kiredhiti kiredhiti, zvinowanzo kuve zvakaoma kuti bhizinesi rekutanga-kana bhizimusi idzva ripiwe chikwereti pane zvaro zvoga. Zvikwereti zvinodikanwa uye mitsara yechikwereti yaizowanzoda kutanga yavimbiswa nemuridzi webhizinesi, neake ega mbiri yechikwereti uye chiyero chinoshandiswa kuona huwandu hwechikwereti chiripo. Zvinogona kutora makore ekutengeserana akabudirira uye kuzivisa kune akasiyana emakambani ekuzivisa zvikwereti kune bhizinesi kana mubatanidzwa kuti ikure chikwereti uye ibatsirwe kubva kune akasiyana bhizinesi zvikwereti uye mashandiro ekushandisa echikwereti anowanikwa pamitengo yakanaka (pasina kuda iwo wega ma profiles e varidzi). Makambani Anopindirwa anopa akakosha, ehunyanzvi rubatsiro nekugadzwa kwekambani kiredhiti, uye isu tinogona kupfupisa zvakanyanya iyo nguva yakaringana kuti tiite yakanakisa mbiri yechikwereti. Isu tinopa mhedzisiro yakaratidza- Unogona kuseta yechokwadi bhizinesi kiredhiti, nekukurumidza uye nyore. Fona izvozvi!
Fonera nyanzvi dzedu kuti dzidze zvakawanda nezvekuti mapurogiramu edu echikwereti, nekugutsikana anovimbisa, anogona kukubatsira iwe! 800.830.1055 Kubhadhara Mahara kana 661.253.3303 Nyika dzese.